Nahavita nanoratra mari-pamantarana marika amerikana i Angelbiss
Angelbiss dia tsy marika fanta-daza manerantany fa marika marika tompon'andraikitra ihany koa. Manomboka amin'ny fananana ny vokatra teknolojia fikarohana sy fampandrosoana tsy miankina ka hatramin'ny fahazoana fankatoavana amin'ny lafiny rehetra. Ity dia dingana iray amin'ny fanatsarana hatrany ny kalitaon'ny vokariny. Vao tsy ela akory izay, niditra an-tsehatra i Angelbiss ...Hamaky bebe kokoa »
Fampiasana milina azo sotroina azo averina azo alaina (AC, DC, bateria)
Fotoana fandefasana: 02-14-2021
Angelbiss dia namorona milina azo sotroina azo alaina azo alaina (AC, DC, bateria): AVERLAST 25B. Tsy ny tombony azon'ny Angelbiss fitaovana Suction Machine roa hafa: rafitra fiarovana avo roa heny amin'ny fiarovana, rafitra tavoahangy plug-in mivantana, tsindry iray monja mba hamoahana ny tavoahangy 1400ml tavoahangy ...Hamaky bebe kokoa »
Nahavita nanoratra mari-pamantarana marika alemana i Angelbiss
Fotoana fandefasana: 02-07-2021
Angelbiss dia tsy marika fanta-daza manerantany fa marika marika tompon'andraikitra ihany koa. Manomboka amin'ny fikarohanay manokana sy ny fampandrosoana ny vokatra teknika, hatramin'ny fanekena ny lafiny rehetra. Ity dia dingana iray amin'ny fanatsarana hatrany ny kalitaon'ny vokariny. Manaja sy mikarakara ny mpamorona rehetra sy ny R&D p ...Hamaky bebe kokoa »
Nanangana vondrona fifanakalozan-kevitra momba ny tsy fahombiazan'ny mpamorona oksizenina
2020.11.05, Angelbiss dia nametraka vondrona fifanakalozan-kevitra momba ny tsy fahombiazan'ny fiarovana amin'ny sehatra sosialy Facebook. Nahoana isika no tokony hametraka vondrona fifanakalozan-kevitra momba ny tsy fahombiazan'ny mpamorona ôksizenina? Satria rehefa mahazo ny vokatra ny mpanjifantsika farany dia mitadiava olana na mifanena amina pro tsy voavaha ny mpivarotra ...Hamaky bebe kokoa »
Mpitafa oksizenina azo entina azo ampiasaina amin'ny lembalemba?
Fotoana fandefasana: 01-17-2021
Ny concentrator oxygen oxygen portable Angelbiss dia afaka mihazakazaka 15000 metatra. Mba hanaporofoana fa ny concentrator oxygen oxygen portable Angelbiss dia azon'ny mpanjifa monina amin'ny faritra avo be. Tamin'ny taona 2018, ny ekipan'i Angelbiss 'R&D dia nitety faritany maro hatrany amin'ny lapan'ny Potala (15000 metatra) ao Tibet, Sina. Thi ...Hamaky bebe kokoa »
Fotoana famoahana: 01-06-2021
Salama namana malala, firariana soa ho anao sy ny orinasanay amin'ny taona vaovao 2021. Faly koa izahay fa manana ny firarian'ny taona vaovao ho an'ny ekipanay sy ny orinasantsika tato anatin'ny andro vitsivitsy. Mety tsy mitovy ny fomba fijerintsika amin'ny teboka sasany, fa ny tanjontsika dia mitovy. Mino izahay fa samy hahomby amin'ny fanaovana ...Hamaky bebe kokoa »
SAMBATRA TAONA Vaovao 2021 !!!!
Fotoana famoahana: 01-01-2021
Taona miavaka ny 2020, tamin'ity taona ity dia niaina zavatra mahatalanjona maro isika, COVID-19 dia nifaoka an'izao tontolo izao, nandao an'ity tontolo ity i Kobe Bean Bryant, nifarana tamin'ny herisetra ny fihetsiketsehana fanoherana herisetra, tany Etazonia, Brexit, sns. manakaiky, ary ny alahelo rehetra dia hihena tsimoramora ...Hamaky bebe kokoa »
0,1%, mpamokatra ôksizenina izay 0,80% ihany ny fiovaovan'ny toetrany
Fotoana fandefasana: 12-20-2020
Fantatrao ve ny fisian'ny mpamorona oksizenina izay ny fiovaovan'ny toetrany dia 0,1% fotsiny? AngelBiss no mpamokatra oksizenina voalohany mifantoka amin'ny fiovan'ny toetr'andro. Ny mpanamboatra mpamokatra oksizenina voalohany izay afaka mifehy ny tahan'ny fiovan'ny toetr'andro ao anatin'ny 0,1%. ANGEL5S dia andiana mpamokatra ôksizenina manana ...Hamaky bebe kokoa »
Enina andro monja, famokarana oksizenina hyperbaric 3 pcs 60LPM feno
Ny mpamokatra ôksizenina mahery setra Angelbiss 60LPM dia afaka manome oxygen ho an'ny toeram-pitsaboana kely. Raha ampitahaina amin'ny varingarina ôksizenina tsotra dia azo antoka sy azo itokisana kokoa ny mpamokatra oxygen oxygen an'ny Angelbiss. Mandritra izany fotoana izany, ny mpamorona oxygen oxygen Angelbiss dia afaka mampihena ny vidiny, mampihena ny tsindry ary mahafeno ny ...Hamaky bebe kokoa »
Nahavita nanoratra mari-pamantarana marika tany Malezia i Angelbiss
Vao tsy ela akory izay, Angelbiss dia nahavita nanoratra mari-pamantarana marika tany Malezia. Satria Angelbiss dia marika fikarohana sy fampandrosoana tsy miankina izay matotra sy tompon'andraikitra, mikarakara ary manaja ny famoronana. Mba hiarovana ny zon'ireo mpanjifanay isan-karazany sy hitazomana ny ...Hamaky bebe kokoa »
Teknolojia No.1-Mihoatra ny 18 fisoratana anarana momba ny patanty vaovao ho an'ny concentrator oksizenina sy milina suction No.2-Ny bateria voalohany manerantany miorina 5L Oxygen Concentrator dia nahatratra 93% No.3-Test 5L oxygen concentrator ao Tibet 15000ft nahatratra 93% No.4- Masinina mitsoka azo averina azo alaina mandritra ny 3ora No.5-20psi avo mialoha ...Hamaky bebe kokoa »
Fotoana fandefasana: 08-06-2020
Vao tsy ela akory izay dia nahazo patanty modely roa i AngelBiss nomen'ny biraon'ny Fananan-tsaina sinoa. Ireo patanty vaovao azo tamin'ity indray mitoraka ity dia maneho tanteraka ny tanjaka sy ny fahaizan'ny zava-bitan'ny ekipa mpikaroka sy fampandrosoana an'i AngelBiss, ary mitana andraikitra lehibe amin'ny fampivoarana bebe kokoa ...Hamaky bebe kokoa »
2020.11.05, Angelbiss dia nametraka vondrona fifanakalozan-kevitra momba ny tsy fahombiazan'ny fiarovana amin'ny sehatra sosialy Facebook. Nahoana isika no tokony hametraka vondrona fifanakalozan-kevitra momba ny tsy fahombiazan'ny mpamorona ôksizenina? Satria rehefa mpanjifa farany ...
Salama namana malala, firariana soa ho anao sy ny orinasanay amin'ny taona vaovao 2021. Faly koa izahay fa manana ny firarian'ny taona vaovao ho an'ny ekipanay sy ny orinasantsika tato anatin'ny andro vitsivitsy. Mety tsy mitovy ny fomba fijerintsika amin'ny teboka sasany ...
Taona miavaka ny 2020, tamin'ity taona ity dia niaina zavatra mahatalanjona maro isika, COVID-19 no nifaoka an'izao tontolo izao, nandao an'ity tontolo ity i Kobe Bean Bryant, nifarana tamin'ny herisetra ny fihetsiketsehana fanoherana herisetra, tany Etazonia, ...